ပဋိညာဉ် (Covenant) | Rev.U Min Lwin
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ပဋိညာဥ္.	Leaveacomment
ယနေ့ခေတ်ကာလ၌ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမှန်တကယ် ကိုက်ညီမှု မရှိသည့် ပဋိညာဉ် ပြုလုပ်သော ဓလေ့ထုံးစံ တခုကို လွန်ခဲ့သော ကျမ်းစာခေတ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအရာမှာ လူနှစ်ဦးသည် သူတို့၏ နေထိုင်မှု ဘ၀နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများ အတွက် အချင်းချင်း ကတိက၀တ်ပြုလျက် တယောက်ကို တစ်ယောက် လုံးဝ အပ်နှံသော သဘောတူညီမှု ဖြစ်သည်။ ထိုသဘောတူညီမှုကို လက်ဆောင်ပစ္စည်း လဲလှယ်ခြင်း အားဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ ကတိသစ္စာများ ပြု၍သော်လည်းကောင်း (သို့) ပွဲတခုပြုလုပ်၍ သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် သူတို့သည် သွေးသောက်ညီအကိုများ ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုပဋိညာဉ်ကို စောင့်ထိန်းနေသ၍ ကောင်းကြီးဖြစ်လျက် ရှိနေသော်လည်း၊ ထိုပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက် ခဲ့သော် ထိုချိုဖောက်သူသည် အသတ်ခံရပြီး သူ၏မိသားစုသည်လည်း ပြိုကွဲ ပျက်စီးသွားတော့သည်။
လူနှင့် ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်
သမိုင်းကြောင်း စတင်သည့် အချိန်က စတင်ပြီး ဘုရားသခင်သည် လူနှင့် ပဋိညာဉ် တခုကို ထူထောင် တည်ဆောက် ခဲ့သည်။ ဖန်းဆင်းမှုကြီး တခုလုံးကပင်လျှင် ဘုရားသခင်က သူ့ထဲတွင် ရှိသည့်အရာ တခုကို အပ်နှံမှု တခု ဖြစ်နေခဲ့ပြီး မြေကြီးပေါ်တွင် ရှိနေသည့် အရာများဖြင့် အပြည့်အ၀ ပါဝင်ခဲ့သည်။ လူဘက်မှ ဘုရား သခင်ကို ဆက်နွယ်ပတ်သတ်ရာတွင် ပြန်လည် ဆက်ကပ်မှုနှင့် သူ့ကို လုံးဝ မှီခိုမှုသာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ တခုတည်းသော တောင်းဆိုမှုမှာ နာခံခြင်း (Obedience) တခုတည်း သာဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ ၂း၇)
လူ၏ ကျဆင်းခြင်း။ ။ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆက်ကပ်မှုနှင့် မှီခိုအသက်ရှင်မှုကို လူဘက်က အမိန့်တော်ကို မနာခံခြင်းနှင့် စတင်ရုတ်သိမ်းပြီး ပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်လိုက်သည် (ကမ္ဘာ ၃း၁-၆)။ လူသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မာနကြီးခြင်း၊ ပုန်ကန်ထကြွခြင်း၊ ဘုရားကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်လာခြင် စသည်တို့ဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ငြင်ပယ်ခဲ့ကြသည်။ (အလားတူဖြစ်ရပ်များ စာတန်တွင်လည်း ရှိခဲ့သည်ကို သတိရပါ (ဟေရှာ ၁၄း၁၂-၁၄)။
လူတွင် ကျဆင်းခြင်းနှင့် မနာခံမှုများ ရှိနေလျက်ပင် ဘုရားသခင်ဘက်မှ သူ၏ ပဋိညာဉ်ကို ပြန်လည်ပြီး အသစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က လူ၏အနာဂတ် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကတိပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့ကိုယ်သူ တံဆိပ်ခတ် အပ်နှံပြီး အသွေးဖြင့် ပြုလုပ်သော ကွယ်ကာမှုတရပ်ကို လူသား၏ အရှက်တရား အတွက် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်(ကမ္ဘာ ၃း၁၅၊ ၂၁)
အဓိကကျသော ပဋိညာဉ် – အာဗြဟံ
အာဒံအချိန်မှ စပြီး ဘုရားသခင်သည် သူ၏အပ်နှံမှုအား ပြန်လည်တုန့်ပြန်မည့် ဖြောင့်မက်သောသူ ဖြစ်ကာ ထိုသူအားဖြင့် လူသားအားလုံးထံသို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ စီးဆင်းစေမည့် လူတစ်ဦးကို အပြစ်တရား၏ အကျိုးဆက်မှ လုံဝ လွှတ်မြောက်စေရန် အတွက် ရှာဖွေခဲ့သည်။ အာဒံမှ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ခန့် ကြာသောအခါ အာဗြဟံဆိုသူ လူတစ်ဦးအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာ ၁၇း၁-၁၄)
အာဗြဟံ၏အပိုင်း – ငါ့ရှေ့မှာ သွားလာ၍ စုံလင်ခြင်း ရှိလော့ (ကမ္ဘာ ၁၇း၁)
ဘုရားသခင်၏အပိုင်း – အာဗြဟံကို ကြီးမြတ်သော ကတိတော်တခုပေးခဲ့သည်။ ထိုကတိမှာ “သင်သည် လူအများတို့၏ အဘဖြစ်လိမ့်မည်။…………ငါသည် သင့်ကို အလွန်ပွားများစေမည်။ ငါသည် သင်၏ ဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်….စသည်ဖြင့် ကတိပေးခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာ၁၇း၎၊ ၆၊ ၇)
ပဋိညာဉ်ကို တံဆိပ်ခပ်ခြင်း – သင်နှင့်တကွ သင့်နောက်၌ သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ငါ၏ရှေ့မှာ စောင့်ရှောက်ရသော ပဋိညာဉ်တရားမူကား သင်တို့တွင် သားယောင်္ကျားတိုင်း အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာ ခံရမည် (၁၇း၁၀-၁၁)။ ထပ်မံ၍ အသွေးထွက်ရမည်။ အာဗြဟံနှင့် အိမ်သားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံဆပ်ကပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း အာဗြဟံကို ပြန်လည် အပ်နှံခံသည်။
အာဗြဟံကို ဘုရားသခင် စုံစမ်းခြင်း
ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်နှင့် စီမံချက်အပေါ် အာဗြဟံ၏ ဆပ်ကပ် အပ်နှံမှု နာခံမှု မည်မျှလောက် ရှိသည် ဆိုသည်ကို ဘုရားသခင် စမ်းသပ်မှုပြု ခဲ့သည်။ အာဗြဟံတွင် ရှိသော ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေနိုင်မည့် တဦးတည်းသောသား ဣဇတ်ကို ယဇ်ပူဇော်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်(၁၈း၎-၈၊ ၁၉)။ အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေနိုင်မည် ဆိုသည်ကို လုံးဝ သံသယ မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ တောင်းဆိုမှုကို ချက်ခြင်း အကောင်အထည် ဖေါ်ပေးခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ၂၂း၃)
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်နှင့် ထားရှိသာ ပဋိညာဉ်ကို စောင့်ထိန်းကြောင်း တွေ့ရှိသောအခါ သူ့အား ထပ်မံ၍ ကတိတော်များကို ဒုတိယ အကြိမ် အတိပြု ပေးခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာ၂၂း၁၆-၁၈)။ ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ အာဗြဟံအားဖြင့် ဣသရေလ (အစ္စရေး) လူမျိုးများ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူ၏ မျိုးဆက်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် ဤကမ္ဘာ လောကကြီးကို ကယ်တင်မှု ပြုခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကာလ လူ၏တုန့်ပြန်ချက်ကြောင့် ထိုပဋိညာဉ်သည် ပျက်ပြယ်သွားနိုင်ပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ လူများနှင့် ပဋိညာဉ် ပြုလုပ်ရာတွင် အပိုင်း(၄)ပိုင်းကို တိုးတက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအရာများကို စုပေါင်းကာ ဓမ္မဟောင်း ပဋိညာဉ် ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ ထိုအရာများမှာ
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မက်ခြင်း အဆင့်ကို ရှင်းလင်းစွာ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ။ ငါသည် သန့်ရှင်း သောကြောင့် သင်တို့သည် သန့်ရှင်းရမည် (၀တ်ပြု ၁၁း၄၅၊ ထွက် ၂၀း၁-၁၇ ကိုဖတ်ပါ။)
ဘုရားသခင်၏ ကတိတည်ခြင်းနှင့် သစ္စာရှိခြင်းတို့ကို ဖော်ထုပ်ပြသခဲ့သည်။ ။ဣသရေလ လူမျိုးအဖို့ မိန့်တော်မူသော ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ပါးမှ မလျော့။ ရှိသမျှတို့သည် ပြည့်စုံကြ၏ (ယောရှု ၂၁း၄၅ ဆာလံ ၈၆း၁၅ ကိုဖတ်ပါ။)
နာခံဘို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ။သို့ဖြစ်၍ သင်သည် သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားကို ချစ်ရမည်။ စီရင် ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်၊ မှာထားသော ပညတ်တော်တို့ကို အစဉ် စောင့်ရှောက်ရမည်။ (တရာဟော ၁၁း၁၊ ၁၃-၁၅၊ ၂၂-၂၈)
လူ၏ လုံးဝ ဥဿုံ ပျက်စီးနေမှုကို သက်သေထူခဲ့သည်။ ။လူသား အားလုံးတို့သည် လမ်းလွဲကြပြီ။ တညီတညွတ်တည်း ဆွေးမြေ့ ယိုယွင်းခြင်း ရှိကြ၏။ ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သောသူ မရှိ တစ်ယောက်မျှမရှိ။(ဆာလံ ၁၄း၃၊ ယေရမိ ၁၁း၆-၈)
ဓမ္မသစ်ကာလ နောက်ဆုံးဖြစ်သော ဓမ္မသစ်ပဋိညာဉ်ကို ယေရှုခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန် ထမြောက် ခြင်းအားဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျဆင်းနေသော လူသားများနှင့် သူတို့၏ အပြစ်များ အတွက် နောက်ဆုံးသော အသွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော် မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (ဟေဗြဲ ၇း၂၇)
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လူမျိုးနှင့် အလျင်က ပြုလုပ် ထားခဲ့သော သဘော တူညီချက်ကို ပြည့်စုံစေရန် မစုံလင်သော တရားဟောင်း (ပဋိညာဉ်ဟောင်း) ကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အသစ်သော ပဋိညာဉ်ကသာ အပြစ်နှင့် ပြည့်နေသော လူသားများကို ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်လာရန်တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူနှင့် မိဿဟာရ ဖွဲ့ကာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မက်ခြင်းကို တောင့်တ ငတ်မွတ်မှုကို ဖြစ်လာစေသည်။ (၁ကော ၁း၃၀၊ ၂ကော ၅း၁၇၊ တမန်တော် ၁၃း၃၂-၃၃၊ ၃၈-၃၉၊ ရောမ ၆)
ငါတို့သည် ခရစ်တော်ကို သိကြွမ်းခြင်း အားဖြင့် ဘုရားဝတ်၌ အမှန်ပင် မွေ့လျော်နိုင်စေရန် ဘုရားသခင်သည် မဟာ တန်ခိုးတော်ဖြင့် ငါတို့ လိုအပ်သော အရာ ရှိသမျှကိ ချပေး တော်မူ၏။ ခရစ်တော်သည် မိမိ၏ ဘုန်း အသရေတော်နှင့် ကောင်းမြတ်ခြင်းကို ငါတို့အား ခံယူ နိုင်ကြစေရန် ငါတို့အား ခေါ်ယူ ရွှေးကောက် တော်မူပေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကတိ ထားတော်မူသော အလွန်ကြီး၍ အဖိုးထိုက်သည့် ဆုကျေးဇူးများကို ကိုယ်တော်သည် ငါတို့အား ပေးတော်မူ၏။ ထိုဆုကျေးဇူးအားဖြင့် သင်တို့သည် ဤလောကတွင် ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သော ကိလေသာ ဆိုးညစ်မှုများမှ လွတ်မြောက် နိုင်ကြလျက် ဘုရားဇာတိတွင် ပါဝင်ကြစေရန် ဖြစ်သည်။ (၂ပေ ၁း၃-၄ ခေတ်သုံး ကျမ်းစာ)
ပဋိညာဉ် ပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ပဋိညာဉ် ပြုလုပ်တိုင်း ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မပြည့်စုံခဲ့ပါ။ ယခုနောက် အသစ် ဖြစ်သော ပဋိညာဉ် အသစ်မှာ အာမခံချက် အပြည့်အ၀နှင့် ခိုင်ခံ နေပါသည်။ ယခု အခါ ဘုရားသခင်သည် သူပိုင် ဆိုင်သော လူစုတော်၊ သူပိုင်သော အသင်းတော် နှင့် သူပြင်ဆင်ထားသော ကယ်တင်ခြင်း ကိုလက်ခံပြီး သူ့ကို သခင်အရာတွင် ထားသော သူများ ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံလျက် ယေရှုခရစ်တော်၏ အခွင့်အာဏာနှင့် တန်ခိုးတော်ကိုလည်းကောင်း၊ သူ၏ပုံသက်သေကို လည်းကောင်း ရယူကာ အကောင်းဆုံး အသက်ရှင် နေကြပေပြီ။
၁ပေ ၂း၉ ကိုဖတ်ပြီး ထွက်မြောက် ၁၉း၅-၆၊ တမန် ၁၅း၁၄ တို့ကို နှိုင်းယှဉ် ကြည်ပါ။
ရွေးချယ်သော လူမျိုးတော် – ဘုရားသခင်ကို ချစ်လျက် နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်သောသူ (ဟောရှည် ၂း၁၉၊ ဧဖက် ၅း၂၅)
သန့်ရှင်းသော လူမျိုး – ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မက်ခြင်း၊ စုံလင်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်သော အသင်းတော်ကို အများရှေ့တွင် ဖေါ်ပြသော လူမျိုး (ဧဖက် ၅း၂၅-၂၆)
မင်းစည်းစိမ် ရှိသော ယဇ်ပရောဟိတ် – ဘုရားသခင် အလိုတော် အတိုင်း ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်၍ ချီးမွမ်းခြင်း အမှုကို ပြုသောသူ (ယောဟန် ၄း၂၃-၂၄၊ ၆ရာ ၅း၁၂၊ ၁၃)
ထူးခြားသော လူမျိုး – ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားသောသူ၊ သူ၏ အခွင့်အာဏာကို တန်ဘိုးထား လေးစားသူ နှင့် သူ၏ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ များဖြင့် ကြွယ်ဝ နေသော ဘုရား သခင်၏ လူများအားဖြင့် ဘုရား သခင်၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှား လာစေရန် ဖြစ်သည်။ဧဖက် ၃း၉-၁၀၊ ဟေရှာယ ၄၀း၅ ကျွန်တော်တို့၏ အပိုင်း – ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ဆပ်ကပ် အပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ခြင်း လက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်း လက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်ဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသော ယဇ်ကို သင်တို့သည် ပူဇော်၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အား ဆပ်ကပ်ခြင်း တည်းဟူသော သင်တို့ ပြုအပ်သော ၀တ်ကို ပြုမည့် အကြောင်း ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်ကို ထောက်ထား၍ သင်တို့ကို ငါ တိုက်တွန်း နိုးဆော် ပေ၏။(ရောမ ၁၂း၁)ဘုရားသခင်၏ အပိုင်း – ဘုရားသခင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ထံ ပြန်လည် အပ်နှံ၍ ချီမြှေက်သည်။ သင်တို့သည် အရာရာ၌ သုံးလောက်သော ဥစ္စာအမျိုးမျိုး အစဉ်ရှိ၍ ကောင်းသော အကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့် အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံမည့်အကြောင်း အမျိုးစုံသော မင်္ဂလာ ကျေးဇူးနှင့် အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင် တတ်နိုင်တော်မူ၏။ (၂ကော ၈း၉)
ဓမ္မသစ် ကျမ်းစာထဲတွင် ရှိသမျှသော ကျမ်းပိုဒ်တို့သည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်က လုပ်ဆောင်ပေးသော အရာနှင့် ပဋိညာဉ် တရားသစ်က ကျွန်တော်တို့ ရရှိခံစားရမည့် အမွေတော် အကြောင်းကို ဖွင့်ပြ ပြောဆိုနေပါသည်။ပဋိညာဉ်သစ်၏ တံဆိပ်ခပ်နိုပ်မှုများ
ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော် (ဟေဗြဲ ၉း၁၁-၂၈၊ ၁ပေ ၁း၁၈-၁၉)
သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် (ဧဖက် ၁း၁၃၊ ၁၄၊ တမန် ၂း၃၈-၃၉)
ကျွန်တော်တို့ ရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်ကို ဆပ်ကပ်အပ်နှံလျှက် ရှိကြပြီး ဘုရားသခင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ထံ သူ၏ အခွင့်အာဏာနှင့် အရာအားလုံးကို အပ်နှံထားပြီး ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော် ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လည် ကြွချီလာသည့်အခါ လောကကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိကြသော လူသား အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ၀မ်းမြောက်စွာ မိဿဟာရ ပြုလျှက် အာဒံအပါအ၀င် လူသား အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံသော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်မှုကို ခံစားရရှိပြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ (ရောမ ၈း၁၉-၂၁၊ ဗျာဒိတ် ၂၁း၁-၄)
← ကျေးဇူးတော် အကြောင်း (၃)